Guinea: Mohamed Kagnassy, ​​gorosi emerald yemabhizimusi - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » upfumi »Guinea: Mohamed Kagnassy, ​​gorosi emerald yemabhizimusi - JeuneAfrique.com
Mohamed Kagnassy, ​​munaFebruary paParis International Agricultural Show. © Théau Monnet yeJA
Agribusiness mutungamiri weMutungamiri Alpha Condé kubva ku2016, bhizinesi reMalian Mohamed Kagnassy, ​​Mutungamiri mukuru weWest Wind SA, ari kuwedzera mabasa ayo muGuinea, kunyanya mudijitori.
Nguva dzose dzakanaka, Mohamed Kagnassy anotaridzika Modibo Keita, mutungamiri wekutanga weMali, uye maziso anotinhira emutengesi mukuru, kunyanya kunonyengera. Mutungamiri mukuru weWest Wind SA anoita kunge akawira pasi muhari yebhizimisi uye simba.
Baba vake, Cheikna, "Kare Kagnassy", vanobva kuBanamba (150 km kuchamhembe-kumabvazuva kweBamako), vakamhanya kune imwe yenyika huru yekotoni uye yekutengesa makambani ekutengeserana mumakambani (L Aiglon, iyo yakasiya mabasa ayo mu2007) uye yakapa vatungamiri veWest Africa, kubva kuBamako kusvika kuAbidjan, kuburikidza neLomé.
AT & T inoti yakange iri pamutemo zvakakwana kutengesa dunhu renzvimbo yevashandisi, asi rakaramba rakamira - BGR